Mayelana NATHI - Linyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
I-Linyi Juda isayensi nobuchwepheshe bokuvikelwa kwemvelo ubunjiniyela co., Ltd.iyifektri enomlando weminyaka engaphezu kwengu-30, ikakhulu ebandakanyeka ekuvikelweni kwemvelo mpo lime lime, kuhhavini isithando semishini, imishini yokuvikela imvelo yokususa uthuli nohlelo lokulawula okuzenzakalelayo, njll.
Inkampani yethu iwine ukwethenjwa iningi lamakhasimende ngohlelo oluphelele lokuklama, imikhiqizo eyinhloko enhle, ukwakhiwa okuqinile namandla okukhiqiza, ikhwalithi yobunjiniyela ethembekile, izinga eliphezulu lenkonzo nokusebenza okuhle. Ngaphezu kwalokho, inkampani inamandla amakhulu wezobuchwepheshe, neqembu labafundile kakhulu ekwakhiweni komlilo nasekwakhiweni, ukufakwa kwemishini yokulungisa, ukulungisa iphutha kohlelo lokuzenzakalelayo nezinye izici zokutholakala okujule kakhulu kwezobunjiniyela nabasebenzi bezobuchwepheshe.
Sinikezela ngezinsizakalo ezigcwele kusuka ekwakhiweni kwesikimu jikelele, ukwakhiwa kwephrojekthi, ukwakhiwa kwemishini yokulungisa nokukhiqiza, kusethi ephelele yokumiswa kohlelo lokulawulwa kwamakhemikhali okuzenzakalelayo, ukufakwa kwesiza nokuthunyelwa, ukuqeqeshwa kwabasebenzi bezobuchwepheshe, kanye nokugcinwa kwemishini.
Ngokuya ngokuthuthukisa izinzuzo zethu kulayini wokukhiqiza i-lime, ngenkuthalo siletha ubuchwepheshe obusha obuphakeme futhi sithuthukise izitayela ezintsha zekhekhe lomlilo njengezikhuni ezinegesi. Ngokuthuthuka komnotho emhlabeni, izifundazwe eziningi zanda ngokutshalwa kwezimali kwingqalasizinda. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, silisebenzisa ngokugcwele ithuba elihle. Sinaka kakhulu ukukhiqizwa kukalime okusheshayo ukuthuthukiswa kobuchwepheshe, futhi sizame konke okusemandleni ethu ukuba nenqubekela phambili enkulu ekuguqulweni kwezobuchwepheshe, emisha, nasekuthuthukiseni ikhwalithi yendlela yokukhiqiza; futhi sonke sikulungele ukunikeza amakhasimende avela kuwo wonke umhlaba imishini emihle kakhulu nobuchwepheshe nezinsizakalo zomsindo. Selokhu yasungulwa, sikholelwa ukuthi ikhwalithi impilo yefektri futhi ikhasimende linguNkulunkulu. Siphikelela ekunikezeni amakhasimende ethu ngekhwalithi enhle, amanani aphansi nensizakalo yomsindo. Futhi amasu ethu okukhiqiza ethulwa emazweni angaphezu kwe-10. Sizogcizelela ekukhiqizeni imikhiqizo emihle kakhulu, sinikeza isevisi ephelele emva kokuthengisa kuwo wonke amakhasimende njengokujwayelekile.
Ngemfudumalo amakhasimende kokubili ekhaya nakwamanye amazwe ukuvakashela inkampani yethu!
Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Ukwenza I-calcium Hydroxide,